Holtop dia nametraka barotra fifandraisana amin'ny firenena lehibe tany Azia, Eoropa sy Amerika Avaratra, ary nahazo laza maneran-tany noho ny fanomezana vokatra azo antoka, manam-pahalalana sy fahaizana manaiky ny fampiharana sy fanohanana ny asa.
Holtop foana hanolo-tena ny asa nanirahana ny nanafaka tena mahomby sy ny angovo mamonjy vokatra sy ny vahaolana mba hampihenana ny fandotoana ny tontolo iainana, ny olona mba hahazoana antoka ny fahasalamana sy miaro ny eto an-tany.
no mitarika mpanamboatra ao Shina manokana amin'ny famokarana ny rivotra ny rivotra hafanana fanarenana fitaovana. Naorina tamin'ny 2002, dia efa natokana ho an'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny teknolojia eo amin'ny sehatry ny rivotra sy ny hafanana sitrana angovo fahavaratra fikirakirana fitaovana rivotra mahery 16 taona.
Amin'ny alalan'ny taona maro ny fanavaozana sy ny fampandrosoana, Holtop afaka manome feno entana isan-karazany, hatramin'ny 20 andian-dahatsoratra sy 200 fepetra arahana. Ny entana isan-karazany no tena manarona: Mafana Recovery Ventilators, Energy Recovery Ventilators, rivotra madio Filtration Systems, Rotary Heat Exchangers (Heat kodia sy Enthalpy kodiarana), lovia Mafana Exchangers, Air manazava Units, sns
Manome toky Holtop high quality vokatra amin'ny matihanina R & D ekipa, kilasy voalohany famokarana fitaovana sy mandroso ny rafitra fitantanana. Anarana iombonana Holtop manana milina fanaraha-maso,-pirenena nekena enthalpy Labs, ary lasa soa aman-tsara ny certifications ny ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, tamin'ny taona sy ny EUROVENT. Afa-tsy, Holtop famokarana base voazaha toetra amin'ny toerana amin'ny alalan'ny TUV SUD.
400 Holtop manana mpiasa sy mandrakotra ny faritra mihoatra ny 30.000 metatra toradroa. Isan-taona fahaizany ny hafanana famokarana fitaovana sitrana mahatratra 100.000 milentika. Holtop OEM manome vokatra ho an'ny Midea, LG, Hitachi, McQuay, York, Trane sy Carrier. Toy ny voninahitra, Holtop no mahafeno fepetra ho an'ny Beijing mpamatsy lalao olaimpika 2008 sy Shanghai World Exposition 2010.